तपाइको सास गन्हाएर हैरान हुनुन्छ? यस्ता छन् घरेलु उपचारहरू —
गुलियो खानेकुरा कम खानुहोस : गुलियो खानेकुराहरू खाइसकेपछि मुखमा केहि कणहरू बाँकी हुन्छन । जसप्रति ब्याक्टेरिया पनि छिट्टै नै आकर्षित हुने गर्दछन र ती ब्याक्टेरियाहरू एसिडमा परिणत भई सास गनाउने जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखा पर्दछन । नरिवलको तेल : बिहान दाँत माझ्नु अघि नरिवलको तेलले मुख कुल्ला गर्नुहोस । त्यसपछि मनतातो पानीले कुल्ला गर्नुहोस । जसले सास गनाउने समस्या कम गर्दछ ।घ्यूकुमारीको रस : घ्यूकुमारीको रसमा जिब्रो र मुखमा रहेका ब्याक्टेरिया हटाउने गुण हुन्छ । एकहप्ता सम्म घ्यकुमरीको जुसले मुख कुल्ला गर्नाले सास गनाउने समस्याबाट छुटकरा पाउन सकिन्छ ।
← त्रिचालिस बर्षकी सरस्वती भन्छिन् सकुन्जेल सम्म मोटरसाइकलनै बनाउछु !
धेरैलाई थाहा नभएको एप्पल कम्पनीका बारेमा यी कुराहरू । जान्नुहोस् →
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य तोलाको कती?
७ मंसिर २०७७, आईतवार ०७:०० admin	0
बलियुड अभिनेत्री अनुस्का शर्माले बेबी बंपमा गरेको फोटोशुट भाईरल ! – तस्बिरसहित
१७ पुष २०७७, शुक्रबार ०५:१५ admin	0